Nhọrọ ndị kachasị mma na netwọkụ mmekọrịta ClubHouse | Gam akporosis
Ngwa ClubHouse na-egosi na ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma, bụ ugbu a na-elekọta mmadụ na netwọk na a nzọ na ozi nke audios, emeela ka ịmata ihe n’etiti ọtụtụ ndị ọrụ ndị tinyegoro ya na ngwaọrụ iOS ha. Otu n'ime nnukwu nsogbu n'oge a bụ na ọ dị naanị maka ndị ọrụ Apple.
Iji nweta ya, akwụkwọ ịkpọ oku dị mkpa, ọ bụ maka oge ahụ dị mkpa na onye na-eji ya zitere gị ka ị nwee ike iji ya. ClubHouse na-ekwu na ọ na-arụ ọrụ na ngwa gam akporo, ma ọ dịkarịa ala nke ahụ bụ ihe Mopewa Ogundipe, nke a maara maka ịbụ onye nrụpụta ngwanrọ, na-emesi anyị obi ike.
Taa enwere uzo ndi ozo na ClubHouse nke nwere ike iguzogide gị, ha niile bụ n'efu, nke kachasị mma bụ na ọ chọrọ ngwa na ndebanye aha mbụ. Ọ bara uru ịnwale nke ọ bụla n'ime ha ma kpebie nke dabara na mkpa gị.
3 Oghere Twitter
6 Telegram Voice Nkata
Stereo aghọwo ọnwa ole na ole otu ngwa dị mkpa nyere nnukwu nkwado ọ na-enweta site na Youtubers a ma ama. Ha na-esonyere nnukwu obodo nke bụ nke na-eke pọdkastị na ụzọ mmekorita, ị nwere ike ịme mmemme na opekata mpe mmadụ abụọ.
Ihe okike bu ike ya, o nweela nkwado a na-enye ekele nye ndị na-eme ihe ike, ndị na-akwado ngwa ọrụ iji tụlee ma ọ bụrụ na ị bu n'obi ịme ndụ iji zaa ajụjụ, kamakwa ịmepụta arụmụka. Will ga-enwe ike ịmekọrịta ndị ahụ na-eso gị na ha chọrọ ịmatakwu banyere gị ma ọ bụ ajụjụ ọzọ.
Naanị nsogbu ma ọ bụrụ na enwere ike ịta ụta bụ na ọ dịkarịa ala, ọ dị mkpa ka onye ọzọ bido, ma nke a ga - enye ya ndụ karịa inwe olu abụọ. You ga-enwe ike ịme mmemme redio mgbe ọ dị na ikuku wee kesara ya ndị obodo site na netwọkụ mmekọrịta. Iji malite ị dị nnọọ nwere aha na nbanye.
Stereo: Ka anyị kwuo okwu
Developer: Stereo App Ltd.
Ngwa Discord nwere olu olu iji gwa ndị mmadụ atụkwasịrịOnly ga-achọ naanị ndị ahụ metụtara ya. Ozi ọma ahụ bụ na ị nwere ike isonyere obodo iji kwuo banyere egwuregwu kachasị amasị gị, jikọọ na ha mgbe ị na-egwu egwu, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Otu n'ime nhọrọ ya bụ inwe ike iwepụ ndị otu, mechie igwe okwu gị, ndị ogbi na ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ na-eme ka ọ dị elu karịa ndị ọzọ. Naanị ihu ala ma ọ bụrụ na ịnwere ike itinye otu bụ interface, siri ike, ma ọ bụ oge ijide ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọtụtụ uru na ya.
Na-eje ozi dị ka ngwa iji jikọọ ọkacha mmasị gị PC na console egwuregwuMaka nke a, anyị ga-agbakwunye egwuregwu ọ bụla na ọwa anyị mepụtara. Esemokwu bụ nhọrọ dị oke egwu na ClubHouse ma nwee nnukwu netwọkụ nke ndị ọrụ taa. Ọ bụ a free ngwa na anyị nwere ike ịmepụta otu akaụntụ iji ya.
Ọ bụ asọmpi ClubHouse dị ugbu a na-enweghị mkpa ibudata ihe ọ bụla ka ojiji nke audio chats na ndị ọrụ na ị na-ekpebi. Ndị na-eso ụzọ gị ga-enwe ike isonye na mkparịta ụka ọ bụla n'ụzọ dị mma, maka nke a ihe kachasị mma bụ imepe arụmụka ka ndị niile sonyere wee nwee ike ikwu echiche ha.
Ozugbo olu nkata ụlọ na-kere usu Ọ nwere na ndị mmadụ nwere ike ma ọ bụ enweghị ike ịnweta nke ọ bụla n'ime ha, na-ejedebe na ndị ahụ nọ ha nso. Ndị agha ahụ ga-enwe ike ikpebi ndị mmadụ ga-achụpụ n'ihi omume ọjọọ, nwere ọtụtụ nhọrọ, gụnyere maka oge ụfọdụ.
Ọ na-agụnye nhọrọ ndị na-adọrọ mmasị dịka ịnwe ike ịgụnye emoticons nke netwọkụ microblogging, ọ dị ugbu a na ọnọdụ beta ma ọ bụ naanị ọtụtụ ndị ọrụ na-anwale ya. A awa ole na ole gara aga ụfọdụ ndị ọrụ na-enwe ike ịnweta na oghere Twitter na-enweghị nsogbu ọ bụla, n'ihi ya, ọ ga-adịghị anya inweta niile ọrụ.
Ngaji mara maka ịbụ a ndụ gụgharia ọrụ, lekwasịrị anya naanị n'olu na ụdịdị yiri ngwa Stereo. Nwere ike ịmepụta ọwa ma kwuo maka ihe ị chọrọ na ndị agbakwunyere, ma n'ime netwọkụ kọntaktị gị ma ọ bụ ndị ọrụ nke obodo.
Na Ngaji ị ga-enwe ike ịchọta ọtụtụ ihe, site na nnọkọ DJ na mkparịta ụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọtụtụ arụmụka ndị ọzọ. Okwu dị iche iche ma anyị ga-enwe ike ịchọta ihe ndị ahụ masịrị anyị site na ịchọ ụlọ, maka nke a ka achọrọ ikike nke ndị ọbịa ọ bụla.
Ngaji na-eto eto site na mmali elu, nke mere na ihe karịrị nde mmadụ 10 ebudatara ngwa ahụ ma sonyere obodo. Iji nwee ike iji ngaji ị chọrọ ndebanye aha, email na okwuntughe. Ọ dị ihe dị ka megabytes 38.
Ngaji: Okwu & Egwu Livestream
Jam bụ nhọrọ dị oke egwu ịchọrọ ịme ụlọKwesighi ịdebanye aha, nweta weebụsaịtị ma banye nkọwa ole na ole iji malite iji ọrụ ahụ. Ozugbo etinyere data dị na mbụ, enwere ike ịhazi ya na mgbakwunye nke njirimara onwe onye, ​​agba ụlọ ahụ, mmeghachi omume na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ọnụ ọgụgụ kachasị elu nke ndị mmadụ n'otu otu bụ mmadụ iri na ise, oke dị oke ala mana nke zuru oke iji kparịta ụka site na otu ndị ị kpọrọ. Jam dị mma maka imepụta ụlọ nkata, iji kpaa isiokwu, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme nzukọ ọrụ ngwa ngwa site na nkata olu, iji nwee ike ikwu okwu iji mee ememme, n'etiti ndị ọrụ ndị ọzọ.
Maka òkù a na ọnụ ọgụgụ kachasị nke ndị mmadụ, a ga-eme ya site na njikọ, ọ ga-adị ire ruo mgbe o zuru ma anyị nwere ike ihichapụ ụlọ ahụ mgbe ọ bụla anyị chọrọ ma ọ bụrụhaala na ị mepụtara ya. Jam nwere ike ji mee ihe ọ bụla na ngwaọrụ na Internet ohere na imepụta ime ụlọ ị ga-pịa njikọ a.
Telegram Voice Nkata
Ọ bụrụ na ị nwere Telegram, ị nwere olu nkata ọrụ iji kwurịta okwu n'etiti ndị nọ n'ime otu otu onye nchịkwa mebere. Onye nchịkwa nwere ike ịkwado ya, na-enye ikike ịgwa ndị chọrọ n'oge ọ bụla okwu.
Ihe dị mma bụ na ọ bụrụ na inwere ya, ịchọghị ngwa mpụga iji nwee ike ịgwa ndị mmadụ jikọtara na ọrụ a bara uru. Ọ bụ ụzọ ị ga-esi nwee mmekọrịta chiri anya, na-arụrịta ụka n’isiokwu ma nwee ike ikarịta ụka n’ihe ị chọrọ n’ụzọ dị anya, ebe ọ bụ na e nweghị nsọtụ.
Telegram aburula onye ahia di nkpa Site na nke a na ihe karịrị otu narị ọrụ ọ nwere, na-eto site na ihe dị ka 100 nde ndị ọzọ ọrụ na Jenụwarị 2021. Ngwa a na-aga ịghọ nke tolitere na mbido afọ a, gafere ọtụtụ ndị ọzọ nke ọma ndi amara.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nhọrọ ndị kachasị mma na netwọkụ mmekọrịta ClubHouse